Nidoboka am-ponja ny alin’ny sabotsy teo ny tale jeneralin’ny ladoany tamin’ny andron’ny fitondrana teo aloha. Tsy izy ihany fa mbola nisy mpiara-miasa akaiky taminy teo anivon’ny fadin-tseranana, izay miisa telo, nadoboky ny fampanoavana manokana misahana ny ady amin’ny kolikoly. Vola mitentina manodidina ny 120 miliara ariary no afera vitan’izy ireo avy amin’izany filazana zavatra diso momba ny ao anaty kaontenera izany.
Nifandona ny taksibrosy roa tetsy Ambohidavenona, eny amin’ny lalam-pirenena voalohany. Notaterina tao amin’ny hopitaly Miarinarivo ireo naratra ka ny mpamily roa no tena isan’ny voa mafy. Raha ny fanazavana azo dia nisy olona niampita tampoka ary raha niala azy ny fiara iray dia nifatratra tanteraka tany amin’ilay fiara faharoa. Rava tanteraka ny fiara roa ary marobe ny mpandeha izay naratra tamin’ity lozam-pifamoivoizana ity.
ADIHEVITRA LATSAKA AMBANY BE
Latsaka ambany dia ambany tanteraka ny adihevitra politika eto Madagasikara. Isaky ny misy tsy mety hataon’ny fitondram-panjakàna dia miasa be avy hatrany ireo « compte fake » mamafa ny malotony. Fantatra fa efa tena asan’izy ireo andavanandro mihitsy io karazan’asa mpamotika olona, mpamafa maloto ary mpandemy ny saim-bahoaka ka manova ny marina mba ho diso na koa ny mifanohitra amin’izay. Volabe mihitsy no ampiasaina amin’izany ary manana birao hatramin’ireo mpilalao.
Misesisesy ireo lozam-pifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena kanefa dia nanaovan'ny sampana miadidy ny fifamoivoizana an-tanety (ATT) fisehosehoana be ny amin’ny fandrindrana hatao sy fisavana, indrindra koa amin’izao fotoanan'ny fialantsasatra izao. Amin'ny herinandro anefa no ahatongavan'i Papa ary vao mainka ho betsaka ny hifamoivoy an-tanety.Asa izay hitranga raha toa ka tsy mandeha amin'ny laoniny ny fanaraha-maso.
MANOHANA NY MPITONDRA
Nivoaka tamin'ny fahanginany i Marc Tatandraza. Nilaza izy ny handeha hampiova fo ireo dahalo nitovy taminy. Hita ihany koa ity dahalo niova fo ity fa manohana be ny mpitondra ankehitriny ary sahy nilaza mihitsy aza izy fa ny filoha Andry Rajoelina no namoaka azy tany am-ponja. Namindra fo taminy ny filoha, raha araka ny filazany, ka nahazoany fahafahana madiodio. Midika koa izany fa mibaiko ny fahefam-pitsarana ny fahefana mpanatontosa, indrindra koa ny fahefana faratampony.
Mainka koa simba tao anatin’ny indray mipi-maso ny lazan’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina manoloana ny fitazonana olona ao amin’ny polisy misahana ny heloka bevava noho ny heloka izay natao tamin’ny tambajotra sosialy. Izy anefa no isan’ny niady mafy ny fanovàna ny lalàna momba ny cybercriminalité, fony izy mbola mpanohitra. Niova tokoa izany ary tsy misy fanagadràna intsony. Ankehitriny indray dia miverina io ny fitaovana entina hisamborana sy handrahonana ny mpanohitra ankehitriny. Ny vava no tsy hatao be, hoy ny Ntaolo.